CBS Sports HQ no fantsona farany azo ampiana amin'ny sehatry ny Fanatanjahantena ao amin'ny Apple TV | Avy amin'ny mac aho
Raha any Eropa dia manandrana manome atiny ho an'ny Apple TV izahay, miaraka amina serivisy mivantana na fifanarahana amina tambajotra lehibe, any Etazonia dia misy fantsona vaovao miseho matetika izay manatevin-daharana ny lisitry ny fantsona na ny fandaharana amin'ny Apple TV.
Ny farany nanatevin-daharana dia Fantsona fanatanjahantena HD an'ny CBS, fantatra amin'ny anarana hoe CBS Sports HQ, izay manatevin-daharana ireo fandaharana azo jerena ao amin'ny faritra Sports amin'ny Apple TV. Ny atiny dia alefa 24 ora isan'andro, 7 andro isan-kerinandro ary manomboka amin'ny vaovao ka hatramin'ny fampielezam-peo amin'ny Apple TV.
Ny serivisy natolotry ny CBS dia zaraina maimaimpoana, any amin'ireo toerana misy fifanarahana alefany. Manome atiny manankarena, miaraka amin'ny vaovaon'ny fanatanjahantena, lalao asongadinina ary fifanakalozan-kevitra momba ny fanatanjahantena samihafa. Raha ny tenin'ny orinasa.
CBS SPORTS HQ dia mampiasa ny loharanom-pahalalana mitambatra ao amin'ny CBS Sports, CBSSports.com, 247Sports, SportsLine, CBS Sports Fantasy, ary MaxPreps hanaterana tamba-jotra ara-panatanjahan-tena matanjaka miaraka amin'ny vaovao mivantana sy ny tatitra, ny topy maso ny hetsika, ny famakafakana taorian'ny lalao, soritrasa tsy ho diso anjara , vinavina ary fihenan'ny statistika lalina. Ny tambajotra nomerika dia hanome ny mpijery ny fahalalahana hifehezana ny zavatra jeren'izy ireo ihany koa, miaraka amin'ny fampiasa amin'ny DVR mamela azy ireo hijery ireo fizarana taloha ary hiverina amin'ny fandaharana mivantana.
Izy io dia endrika fahita amin'ny fahitalavitra 24 ora izay nahitana fahombiazana azo refesina. Tamin'ny taona 2017, maherin'ny 287 tapitrisa ireo mpijery, 17% mihoatra ny tamin'ny taon-dasa. Ny CBS sy ny Apple dia mahazo tombony roa amin'ireto fampielezam-peo ireto. Ny iray amin'izy ireo dia mandefa ny atiny ary ny faharoa mameno ny atiny multimedia.
Ny CBS dia miditra ao amin'ny sehatry ny fizarana Sports amin'ny Apple TV, izay ahitantsika ny atiny avy amin'ny fantsona hafa, toy ny ESPN, izay manolotra ny fandefasana hatramin'ny 4 indray fandefasana indray mandeha, na dia amin'izao fotoana izao aza dia tsy misy ny serivisy natolotry ny ESPN.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » CBS Sports HQ no fantsona farany azo ampiana amin'ny sehatry ny Fanatanjahantena ao amin'ny Apple TV
AirPods 2 vaovao sy tranga vaovao ho an'ny AirPods tany am-boalohany?